कसरी चिन्ने मौसमी फ्लु र कोरोना ? – Health Post Nepal
२०७६ चैत १ गते ९:५८
मौसम फेरिने बेला भाइरलको संक्रमण जोखिम बढी हुन्छ। एउटा मौसमा स्वास्थ्य एकनासले चलिरहेको हुन्छ। मौसम परिवर्तन हुनेवित्तिकै स्वास्थ्यमा त्यसको प्रभाव पर्छ। एउटा मौसममा अभ्यस्त भएको शरीरलाई अर्को मौसमसँग अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। यस्तो बेलामा शरीरको इम्युनिटी डिस्व्यालेन्स हुन्छ। जसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा रुघाखोकी लगायत मौसमी संक्रमणको जोखिम बढ्छ।
त्यसैले यस्तो समयमा स्वास्थ्यमा विषेश ध्यान दिनुपर्छ। मौसम परिवर्तन हुँदैमा सबै बिरामी हुने होइनन्। तर, जसको रोगप्रतिरोधात्मक क्षेमता कजोर हुन्छ तिनीहरूलाई भाइरसले चाडो आक्रमण गर्छ। यसमा पनि कडाखाले संक्रमण आउँदा विरामीको संख्या बढ्ने जोखिम हुन्छ।
जस्तो कुनै कोठामा पाँच जना मध्ये एक जनालाई रुघाखोकी लागेको छ। रुघा लागेको व्यक्तिले हाच्छु गर्दा कोठा भित्रका दुई जनामा स¥यो। दुई जनालाई केही भएन भने रुघा सरेका व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षेमता कजोर छ भन्ने हो। त्यसैले मौसमी संक्रमणबाट आत्तिहाल्नुपर्दैन। यसो भन्दैमा लापरबाही नै गर्ने होइन। कडाखाले संक्रमण देखियो भने चिकित्सकको सम्पर्कमा गइहाल्नुपर्छ।
जस्तो अहिलेको मौसमको नै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी जाडो मौसमबाट विस्तारै गर्मि मौसमा टेक्दै छौं। यो मौसमा पनि पहिला देखिने भनेको रुघाखोकी नै हो। अर्को, हामीमा खाना पकायर बासी राखेर अर्को दिन खाने बानी हुन्छ। यस्तो बेलामा सफा र हाइजेनिक फुड खाइएन भने झाडा पखाला लाग्ने जोखिम हुन्छ। यस्तै मौसम परीवर्तन हुँदा ज्वरो आउने पनि हुन्छ।
यस्ता खाले संक्रमणबाट जोगिनका लागि हामीले हाम्रो आनिबानीमा सुधार गर्नुपर्छ। सधै साबुनपानीले राम्रोसँग हात धोएर मात्रै खानेकुरा खाने। कतै बाहिरबाट आउँदा आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिने।
शरीरमा मात्रा पुग्ने गरी सफा र उमालेको पानी पिउने। मास भएको ठाउँमा जानुपरे माक्सको प्रयोग गर्ने। कसैलाई मौसमी संक्रमण भएको थाहा पाए उससँगको सम्पर्कबाट टाढा रहने। आफूलाई रुघा लागेको छ भने पनि अरुलाई नसरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । बरु एक दुई दिन विदा लिएर घरमै बसेर सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। कडा संक्रमण देखिए चिकित्सकको परामर्शमा औषधी सेवन गर्नुपर्छ।
सामान्य रुघा खोकि लाग्दा घरमा तातो पानीका साथै ज्वानो पानी, अदुवा पानी लगायतका घरेलु उपचार गर्ने। यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षेमता बढाउँछ। जस्तो जिरापानीले शरीरको तापक्रमलाई बढाउँछ। यसले शरीरलाई उर्जा प्रदान गरीराख्छ र भाइरललाई बढ्न दिँदैन।
यस्तै हामीले पानी बढी पिउनुपर्छ। जसले घाटी सुख्खा हुन दिँदैन। यसरी धेरै पानी प्युदा रक्तसञ्चार पनि राम्रो भइराख्छ। हाम्रो शरीरको बेकार तत्व दिशा र पिसावबाट बढी निस्किन्छ। हामीले धेरै पानी पिउदा पिसावको माध्यमबाट यस्ता बेकार तत्व जान्छ र शरीरलाई स्वस्थ रहन मद्दत पुग्छ।
के कोरोना र सामान्य रुघालाई आफै छुट्याउन सकिन्छ?
अहिले विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइसरको महामारी फैलिएको छ। कोरोना र रुघाको लक्षण केही हदसम्म मिल्दाजुल्दा छन्। यो भन्दैमा जाँच बिनै हामी रुघा लागेको वा कोरोना भएको छुट्याउन सक्दैनौं।
सबै भाइरसको सिमिलर क्यारेक्टर हुन्छ। जस्तो रुघा लाग्ने, वाकवाकी आउने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, नागबाट सिकान आउने, घाटीको पछाडि दुख्ने, शरीरमा आलश्यता आउने, ज्वाइन्टहरू दुख्नेलगायत भाइरल संक्रमणका लक्षण हुन्। डाक्टरले पनि आँखाले हेरेर यो कोरोना हो होइन भन्न गाह्रो हुन्छ।
चीन लगायतका देशका कोरोना संक्रमित देशको डेटा हेर्दा यसमा संक्रमित बढी सिक हुने। स्वासप्रस्वासमा समस्या चाडो हुने देखिएको छ। ज्वरोमा पनि कडा १०४ डिग्री भन्दा कडा ज्वरो आउने, घाटीको पछाडि दुख्ने, स्वासप्रस्वास छिटो हुने हुन्छ। कोरोनाका संक्रमितहरूलाई तीन/चार दिनसम्म त छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले चेक नै नगरी रुघा र कोरोनाको लक्षण छुट्याउन सकिदैन। यस्तो संक्रमणकालिन अवस्थामा रुघा लाग्दैमा धेरै आत्ति हाल्नु पनि हुँदैन। तर, माथी उल्लेखित लक्षण देखापरे चिकित्सकको सम्पर्कमा भने आइहाल्नु राम्रो हो। यदि कोरोनाको संक्रमण देखियो भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यही बस्नु राम्रो हुन्छ।
रुघाखोकिलाई सामान्य रुपमा नलिने
अहिले रुघाखोकीलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन। विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला हामीले सामान्य रुघाखोकी त हो भनेर बस्यौं भने त्यो जटिल समस्या बनिदिन सक्छ।
रुघाखोकी भाइरलले नै हुने हो। तर, कुनै बेला यही भाइरल पनि बलियो भएर आइदिन सक्छ। भाइरसको संक्रमणले स्वासप्रस्वास सामान्य भयो, मुटुको चाल बढेन, प्रेसर बढेन भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ। तर, यसको संक्रमणले ति प्रक्रियामा असर ग¥यो भने त्यो कडाखाले भयो। यसको असर व्यक्ति अनुसार फरक पनि हुनसक्छ। लक्षण एउटै भए पनि हेमोडाइनामिक अनुसार यसको असर फरक हुनसक्छ।
मौसम समय अनुसार परिवर्तन भइराख्छ। मौसमलाई दोष दिने होइन। तर, मौसम अनुसार आउने भाइरलले समस्या गर्ने हो। त्यसैले हामीले समय अनुसार सावधानी अपनाउने हो। भाइरल बेला हेरेर आउँदैन। भाइरल जहिले सुकै आउने भएकाले सधै स्वास्थ्यप्रति सजक भइराख्नुपर्छ।
स्टार अस्पतालमा कार्यरत डा‌. रञ्जितसँग हेल्थपाेस्ट नेपालका यज्ञराज जाेशीले गरेकाे कुराकानीका आधारमा तयार पारिएकाे आलेख
One thought on “कसरी चिन्ने मौसमी फ्लु र कोरोना ?”
Tara naag (snake) ra naak (nose) chai chhuttaunu parne ho kere…